by UPatricia Daniels, uMbhali oNcedisayo
Umbhali we 'Iidiliya zoMsindo' kunye 'NeeMice kunye namadoda'
UJohn Steinbeck wayengumvelisi waseMerika, umbhali omfutshane webali, kunye nomlobi-ntatheli owaziwayo ngexesha lakhe lokudakumba, "Iidiliya Zomsindo," okwamenza umvuzo wePulitzer.
Iincwadana ezininzi ze-Steinbeck ziye zaba ngama-classics zanamhlanje kwaye ezininzi zenziwa iifilimu nemidlalo ephumelelayo. UJohn Steinbeck wanikezwa umvuzo weNobel kwiNcwadi ngo-1962 kunye noMdongiso woMongameli weMbeko ngo-1964.
Imihla: Feb. 27, 1902 -Disemba 20, 1968
Eyaziwayo Njengaye: John Ernst Steinbeck, Jr.
I-Quote eyaziwayo: "Umntu kuphela uhlobo oluthile lwe-firearm olubeka isicupho sakhe, sihlabe, size sinyathelo."
UJohn Steinbeck wazalelwa ngoFebruwari 27, 1902, eSalinas, eCalifornia ku-Olive Hamilton Steinbeck, owayengumfundisi kunye noJohn Ernst Steinbeck, umphathi wendawo yokugcoba. U-Young Steinbeck wayenodade abathathu. Njengomfana kuphela kwintsapho, wayedla ngokuphangelwa ngumama.
UJohn Ernst Sr. wafaka ebantwaneni bakhe inhlonipho enzulu kwimvelo waza wabafundisa malunga nokulima kunye nendlela yokunyamekela izilwanyana. Intsapho yaphakamisa iinkukhu kunye neefologi kwaye yayineenkomo kunye nePony yaseShetland. (I-pony ethandekayo, egama linguJill, yayiza kuba yimpumelelo enye yamabali aseStinbeck kamva, "i-Red Pony.")
Ukufunda kwakuxabiseke kakhulu endlwini kaSteinbeck. Abazali babo bafunda iincwadi ezifundisayo kubantwana kunye noYohn Steinbeck omncinane bafunda ukufunda ngaphambi kokuba aqale isikolo.
Ngokukhawuleza wavelisa i-knack ekwenzeni amabali akhe.
Isikolo samabanga aphakamileyo kunye neKholeji
Iintloni kunye neengxaki njengomntwana omncinane, uSteinbeck waba nethemba xa ephakamileyo esikolweni esiphakeme. Wayesebenza kwiphephandaba lesikole waza wajoyina ibhasikidi kunye namaqela okubhukuda. U-Steinbeck waqhaqhazela phantsi kokukhuthazwa ngumfundisi wakhe we-british-grade british, owayedumisa iingoma zakhe waza wamcenga ukuba aqhubeke ebhala.
Emva kokugqiba esikolweni esiphakeme ngo-1919, uSteinbeck waya kwiYunivesithi yeStanford ePalo Alto, eCalifornia. Ukukhathazeka ezininzi zezifundo ezifunekayo ukuze zithole idigri, uSteinbeck wasayina kuphela kwiiklasi ezithandwayo kuye, njengeencwadi, imbali kunye nokubhala okubhaliweyo. UStebbeck waphuma kwiikholeji ngexesha (ngenxa yokuba wayefuna ukufumana imali yokufundiswa), kuphela ukuqhuba kwakhona iklasi emva koko.
Phakathi kweempawu eziseStanford, uSteinbeck wasebenza kwiifama ezahlukeneyo zaseCalifornia ngethuba lokuvuna, ehlala phakathi kwabalimi beefama. Ukususela kweli liva, wafunda ngobomi beCalifornia. UStebbeck wayemthanda amabali aphulaphule asebenza nabo kunye nokuzinikela ukuhlawula nabani na owamxelela ibali ayenokuyisebenzisa kwenye yeencwadi zakhe.
Ngo-1925, uSteinbeck wanquma ukuba wayenayo eyaneleyo yeekholeji. Washiya ngaphandle kokugqiba idigri yakhe, ulungele ukuqhubela kwisigaba esilandelayo sobomi bakhe. Nangona abaninzi abafuna ukubhala bexesha lakhe beza eParis ukuba baphefumlelwe, uSteinbeck wabeka izinto zakhe kwiSixeko saseNew York.
USteinbeck kwisixeko saseNew York
Emva kokusebenza lonke ihlobo ukuze athole imali yohambo lwakhe, uSteinbe wahamba ngomkhumbi waya kwiSixeko saseNew York ngoNovemba 1925. Wayehamba kwiindawo ezisemagqabini aseCalifornia naseMexico, ngePanama Canal , waya kwiCaribbean ngaphambi kokuba afike eNew York.
Ngenye e-New York, uSteinbeck wazixhasa ngokusebenza kwimisebenzi eyahlukeneyo, kubandakanywa njengomsebenzi wokwakha kunye nomnyatheli wephephandaba. Wabhala ngokukhawuleza ngexesha lakhe kwiiyure kwaye wakhuthazwa ngumhleli ukuba athumele iqela lakhe lamabali ukupapashwa.
Ngelishwa, xa uSteinck ehamba ukuhambisa amabali akhe, wafunda ukuba umhleli akazange asebenze kuloo ndlu yokushicilela; Umhleli omtsha wenqwenela ukukhangela kwamabali akhe.
Ethukuthele kwaye ephazamiseke yilo guquko lwezehlakalo, uSteinbeck washiya iphupha lakhe lokuba enze umbhali kwisixeko saseNew York. Wafumana uhambo oluya ekhaya ngokusebenza ebhodini lomkhupheli waza wafika eCalifornia ehlobo le-1926.
Umtshato Nobomi njengoMbhali
Emva kokubuya kwakhe, uSteinbeck wathola umsebenzi njengomnakekeli kwikhaya leeholide eLake Tahoe, eCalifornia. Ngethuba leminyaka emibini achitha ixesha apho asebenza khona, wayevelisa kakhulu, ebhala ukuqokelela amabali amfutshane kunye nokugqiba inombolo yakhe yokuqala, "iNqabana yeGolide." Emva kokutshatyalaliswa kwemininzi, le ncwadi yagqitywa ngumvakalisi ngo-1929.
UStebeck wasebenza emininzi yemisebenzi ukuze azincede yena ngenkathi eqhubeka ebhala njalo ngokusemandleni akhe. Ekusebenzeni kwakhe kwintlanzi, wadibana noCarol Henning, umfazi owayeza kuba ngumfazi wokuqala. Batshata ngoJanuwari 1930, emva kokuphumelela okuthobekileyo kukaSteinck kunye nencwadi yakhe yokuqala.
Xa i- Depression Depression ihlasela, uSteinbe nomkakhe, abakwazi ukufumana imisebenzi, baphoqeleka ukuba bayeke indlu yabo. Ngomfanekiso wokuxhasa umsebenzi wokubhala wengane yakhe, uyise kaTteinck wathuma isibini isibonelelo esincinci senyanga kwaye sawavumela ukuba baphile ngaphandle kwerenti kwindlu yendlu yasePacific Grove eMonterey Bay eCalifornia.
I-Steinbecks yayinandipha ubomi ePacific Grove, apho benza umngane wakhe kumhlobo wakhe uEl Ricketts. I-biologist yezilwanyana zasemanzini ezazigijimela ibhubhoratri encinane, uRicketts waqesha uCarol ukuba ancede kunye nokugcinwa kwengxelo ebhodini lakhe.
UJohn Steinbeck no-Ed Ricketts baxubusha iingxoxo zefilosofi ezintle, ezathonya kakhulu uSteinbeck. U-Steinbeck weza kubona ukufana phakathi kweendlela zokuziphatha kwezilwanyana kwimeko yawo kunye nabantu beendawo ezikuzo.
U-Steinbeck uhleli ngokubhala rhoqo, kunye noCarol ekhonza njengomlobi wakhe kunye nomhleli. Ngomnyaka we-1932, wanyathelisa ibini lakhe lesibini elifutshane kunye no-1933, inomxholo wakhe wesibili othi "KuThixo Ongaziwayo."
Noko ke, uSteinbeck wayenenhlanhla yatshintsha, nangona kunjalo, xa unina wahlaselwa sisifo esibuhlungu ngo-1933. Yena noCarol bahlala endlwini yabazali bakhe eSalinas ukumnceda.
Ngesikhathi ehlezi ngasecaleni lomama wakhe, uSteinbeck wabhala oko kwakuya kuba yinto yamandla akhe athandwa kakhulu - "I-Red Pony," eyapapashwa kuqala njengebali elifutshane kwaye kamva landiswa libe yinto yokubhala.
Nangona ezi mpu melelo, uSteinbe nomkakhe babenzima kakhulu ngemali. Xa u-Olive Steinbeck efa ngowe-1934, uSteinck noCarol, kunye nomdala uStebeck, babuyela endlwini yasePacific Grove, eyayidinga ukugcinwa ngaphantsi kwendlu enkulu eSalinas.
Ngo-1935, uyise kaSteinck wafa, iintsuku ezintlanu ngaphambi kokushicilelwa kwintanethi kaSteinbeck iTertilla Flat , uSteinbeck wokuqala uphumelele kwezoshishino. Ngenxa yokuthandana kwencwadi, uSteinbeck waba ngumntu ogqithiseleyo, inxaxheba ayengayithobeli.
Ngowe-1936, u-Steinbeck noCarol bakhela ikhaya elitsha eLos Gatos ngenzame yokuphuma kuyo yonke intengiso eyenziwe nguSteinck's reputation. Ngethuba le ndlu yayakhiwa, uSteinbeck wasebenza kwi-novella yakhe, ethi " YeeMice neMadoda. "
Iprojekthi elandelayo kaSteinbeck, eyabelwa yiSan Francisco News ngowe-1936, yayingumxholo wecandelo elisixhenxe kwabasebenzi basemaphandleni abafudukela kwiindawo ezisemaphandleni aseCalifornia.
U-Steinbeck (obizwa nge-series "I-Gypsies Yokuvuna") waya kwiinkampu ezininzi ze-squatters, kunye ne-"camp camp" exhaswe nguRhulumente ukuqokelela ulwazi ngengxelo yakhe. Ufumene iimeko eziphazamisayo kwiinkampu ezininzi, apho abantu babesifa ngenxa yesifo kunye nendlala.
UJohn Steinbeck wayeva novelwano olukhulu kwabasebenzi abaxakekileyo nabafudukayo, abahluleli babo ababandakanyi nje kuphela abafuduka baseMexico kodwa kunye neentsapho zaseMerika zibalekela i- Dust Bowl .
Wagqiba ekubeni abhale incwadana malunga nabafuduki beDust Bowl kwaye baceba ukuyibiza ngokuthi "I-Oklahomans." Ibali lijoliswe kwikhaya likaJoad, u-Oklahomans-njengabanye abaninzi ngexesha le-Dust Bowl iminyaka-baphoqeleka ukuba bashiye ipulazi labo bafune ubomi obungcono eCalifornia.
Umzobo wobuciko kaSteinbeck: 'Iidiliya Zomsindo'
UStebbeck waqala ukusebenza kwincwadi yakhe entsha ngoMeyi 1938. Kamva wathi emva kokuba ibali liye lenziwa ngokutsha ekhanda lakhe ngaphambi kokuqala ukubhala.
Ngomncedi kaCarol ukuthayipha nokuhlela umbhalo wesahluko esingu-750 (uphinde wafika kunye nesihloko), uSteinbeck wagqiba "Iidiliya Zomsindo" ngo-Oktobha 1938, kanye neentsuku ezili-100 emva kokuqalisa kwakhe. Le ncwadi yapapashwa nguViking Press ngo-Ephreli 1939.
" Amagilebhisi enkqumbo " abangela ukuxokozela phakathi kweCalifornia ukuvelisa abalimi, ababethetha ukuba iimeko zokubafudukelayo zazingekho nje ngolu hlobo njengoko uSteinck wayebachazele. Bammangalela uSteinbeck ukuba ungumqambimanga kunye nomkhomanisi.
Kungekudala, intatheli ezivela kumaphephancwadi nakumaphephancwadi zazizicima ukuba ziphande iinkampu kwaye zafumanisa ukuba zibuhlungu njengokuba uSteinck wayechazile. UMongameli wokuqala uEleanor Roosevelt watyelela iinkampu ezininzi waza wafika kwisigqibo esifanayo.
Enye yeencwadi ezithengiswa kakhulu kwixesha lonke, "Iidiliya Zomsindo" zanqoba i-Pulitzer Prize ngo-1940 kwaye yenziwa i-movie ephumeleleyo ngaloo nyaka.
Nangona u-Steinbeck waphumelela ngempumelelo, umtshato wakhe wawunomdla wokufumana le ncwadi. Ukwenza izinto zibe zibi nakakhulu, xa uCarol ekhulelwe ngo-1939, uSteinbeck wamnyanzela ukuba aphelise ukukhulelwa. Inkqubo yokubhokoza yabangela ukuba uCarol ayidinga i-hysterectomy.
Ukudinwa kwalo lonke uluntu, uSteinbeck nomkakhe baqala ukuhamba ngeeveki ezintandathu ukuya e-Mexican Gulf of California ngo-Matshi 1940 kunye nomhlobo wabo uEd Ricketts. Injongo yohambo yayiyikuqokelela kunye neenkcukacha zezityalo nezityalo zezilwanyana.
Amadoda amabini ashicilela incwadi malunga nohambo olubizwa ngokuthi "uLwandle lwaseCortez." Le ncwadi yayingeyona mpu melelo kodwa yayidunyiswa ngabanye njengenkxaso ebalulekileyo kwisayensi yolwandle.
Umfazi kaSteinbeck wayefikile enethemba lokuqhawula umtshato wabo onzima kodwa kungenanto. UJohn noCarol Steinbeck bahlukana ngo-1941. USteinck wabuyela kwisixeko saseNew York, apho waqala ukuthandana nomlingisi uGwyn Conger, owayeneminyaka eli-17 ubudala. I-Steinbecks yahlukanisa ngo-1943.
Esinye isiphumo esihle soluhambo lwavela kwibali uStebeck weva kwidolophana encinci, echukumisa ukuba abhale enye yeenvellas zakhe ezaziwa kakhulu: "I-Pearl." Kwimbali, ubomi bomlobi obuthathaka bubuhlungu emva kokufumana iparele elixabisekileyo. "I-Pearl" nayo yenziwa i-movie.
Umtshato wesibini kaSteinbeck
USteinbeck utshatile uGwyn Conger ngo-Matshi 1943 xa wayeneminyaka engama-41 kunye nomfazi wakhe omtsha nje engama-24 ubudala. Kwiinyanga kuphela emva komtshato - kwaye kuninzi kumfazi wakhe - uSteinbeck wathatha isabelo njengombhali wezemfazwe eNew York Herald Tribune. Amabali akhe agxininisa kwicala lomntu weMfazwe Yehlabathi II , kunokuba achaze iimfazwe okanye imikhosi yempi.
UStebeck wasebenzisa iinyanga eziliqela ehlala kunye namajoni aseMerika kwaye wayekho ngexesha lokulwa kwiimeko ezininzi.
Ngo-Agasti 1944, uGwyn wazala unyana uT Thom. Intsapho yafudukela kwikhaya elitsha eMonerey ngo-Oktobha 1944. USteinck waqala ukusebenza kwincwadi yakhe ethi "Cannery Row," ibali elincinci ngakumbi kunemisebenzi yakhe yangaphambili, eyayinomlingiswa oyintloko owasekelwe ku-Ed Ricketts. Le ncwadi yapapashwa ngo-1945.
Intsapho yabuyela kwisixeko saseNew York, apho uGwyn wazala unyana uJohn Steinbeck IV ngoJuni ka-1946. Engenakuvuyela umtshato kwaye enqwenela ukubuyela kumsebenzi wakhe, uGwyn wabuza uSteinck ukuba aqhawule umtshato ngo-1948 waza wabuyela eCalifornia abafana.
Ngaphambi kokuba aphule kunye noGwyn, uSteinbeck wachitheka ukuba afunde ngokufa komhlobo wakhe omhle uEd Ricketts, owayebulewe xa imoto yakhe idibene nesitimela ngoMeyi 1948.
Umtshato wesithathu kunye neNobel Prize
USteinbeck wagcina ebuyela kwintsapho yasePacific Grove. Wayebuhlungu kwaye unesizungu ixesha elide ngaphambi kokudibana nomfazi owaba ngumfazi wesithathu - u-Elaine Scott, umphathi we-Broadway. Aba babini badibana eCalifornia ngo-1949 baza batshata ngo-1950 kwisixeko saseNew York xa uSteinbe eneminyaka engama-48 ubudala kunye no-Elaine wayengu-36.
UStebbeck waqala ukusebenza encwadini entsha eyayibiza ngokuthi "iSalinas Valley," kamva wabiza kwakhona ngokuthi "EMpuma ye-Eden." Ishicilelwe ngo-1952, le ncwadi yaba yintengiso. UStebeck waqhubeka esebenza kwiimveli kunye nokubhala amacandelo amancinci amaphephancwadi kunye namaphephandaba. Yena no-Elaine, baseNew York, bahamba rhoqo eYurophu baze bachitha phantse unyaka behlala eParis.
Iminyaka Yokugqibela kaSteinbeck
U-Steinbeck wahlala enemveliso, nangona wayebuhlungu ngo-1959 kunye nokuhlaselwa kwentliziyo ngo-1961. Kwakhona ngo-1961, uSteinbeck washicilela "Ubusika Bokunganeliseki" kunye nonyaka kamva, wapapasha "Ukuhamba kunye noCharley," incwadi engeyona inkohliso Uhambo lwakhe lwahamba kunye nenja yakhe.
Ngo-Oktobha 1962, uJohn Steinbeck wathola iNdel Prize yoLwazi . Abanye abagxeki bakholelwa ukuba akafanelanga ukufumana ibhaso ngenxa yokuba umsebenzi wakhe omkhulu, "Iidiliya Zomsindo," sele ibhaliwe iminyaka emininzi ngaphambili.
Ukunikezelwa koMongameli woMongameli woMhlonishwa ngo-1964, uSteinbe ngokwakhe waziva ukuba umzimba wakhe awuzange uvumele ukuba uhlonishwe.
Ekuncitshiswe ngenye intambo kunye nokuhlaselwa kwentliziyo emibini, uSteinbeck waxhomekeka kwi-oksijini kunye nokunakekelwa kwonyango ekhaya lakhe. Ngomhla wama-20 ka-1968, wafa ngesifo senhliziyo eneminyaka engama-66.
Ixesha leMfazwe yaseVietnam
King King of the Franks kunye neLombards
U-Lizzie Borden Utyholwa ngo-Ax Bulala ngoYise noTata
Iintlobo ezili-14 zabantu kwiMilinganiselo ye-New Year's Eve Party